Dowladda Masar oo beenisay eedeeyn uga timid hay’adda Amnesty International – Radio Muqdisho
Dowladda Masar oo beenisay eedeeyn uga timid hay’adda Amnesty International
Wasiirka arrimaha gudaha dalka Masar, Magdy Abdul Ghaffaa ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay gabi ahaanba eedaymaha loo jeediyay ee ku aaddan ku xad-gudubka xuquuqda Aadanaha.
Wasiirka ayaa tilmaamay in laamaha amniga ee dalkiisu ay ku shaqeeyaan sharciga u degsan dalkooda balse ayan jirin ku xad gudub ay kula kaceen shacabka reer Masar.
Hadalka wasiirka ayaa imanaya markii hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay shaacisay in laamaha ammaanka Masar ay mas’uul ka yihiin dil,Afdub, xarig iyo jir dil joogto ah oo sannadkii tagey 2015-kii ka dhacay dalkaasi.
Tacaddiyadan ayay hay’addu ku sheegtay inay qayb ka yihiin dedaallo ay dowladda Masar ku cabburinayso mucaaridka, dadka la waayeyna ay ku jiraan carruur, arday, siyaasiyiin iyo muwaaddiniin reer Masar ah oo isku dayey inay muddahaaradyo sameeyaan.
Amnesty International ayaa dowladda Masar ku eedeysay kumanaan qof oo ay Ciidamada ammaanku kala baxeen guryahooda iyo goobaha ay ku sugan yihiin,kuwaasoo qaarkood la waayay halka ay ku sugan yihiin.
Dowladda Masar ee uu hoggaamiyo C/Fitaax Al-siisii oo talada dalka kala wareegay madaxweynihii sida sharciga loo soo doortay ee Maxamed Mursi sanadkii 2013,ayaa waxay awood ciidan ku maquunisay mucaaridka iyo ururka Iqwaanu Muslimiin oo ay ka mabnuucday dalkaasi.
Hillary Clinton oo tilmaantay Shakhsiga ay Madaxweyne ku xigeen ka dhiganayso
SAWIRO : Akhriso Warsaxaafadeed ka soo baxay Shirka Kismaayo Ee Siyaasadda Amniga Qaran